Ndị na -emepụta ụgbọ ala pallet & ndị na -eweta ya China pallet gwongworo ụlọ ọrụ
Nnukwu ọkwa dị elu ụgbọala pallet, A na -ejikarị ngwaahịa a maka arụmọrụ nkwakọba ihe, ntọala lọjistik, yana dịkwa mma maka usoro na -aga n'ihu n'ọmụmụ ihe, enwere ike iji ya dị ka ikpo okwu ọrụ. Mgbe ịdị elu dị ihe na-erughị 300 mm, ọ bụ nha ka iji gwongworo. PLC na-ejikwa akpa pallet scissor pallet, Ngwa a bụ ngwaọrụ ga-eji na ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ, yana ọrụ nke na-achọpụta na-akpalite ịrị elu ma ọ bụ daa.
DAXLIFTER Brand Mini Electric Power Pallet Truck bụ ngwaahịa ọhụrụ nke anyị nyochara wee mepụta. Kwesịrị ekwesị maka ibuputa ihe ụlọ nkwakọba ihe na -ejikwa ọrụ yana ibupute ibu ọrụ. Ihe kachasị mkpa bụ na ọ nwere ọrụ na -ebugharị ebugharị ya na wiil yana ebuli ọkụ eletrik nke onwe ya.
Akwụkwọ ntuziaka China Trolley Lift Pallet Truck bụ akụrụngwa nkwakọba akụ na ụba na njikwa akụrụngwa niile na uwe maka ụlọ nkwakọba ihe enweghị ebe ọkụ eletrik zuru ezu iji rụọ ọrụ. gbada,
Ụgbọ ala pallet gwongworo dị elu Daxlifter bụ akụrụngwa na -ejikwa ihe pụrụ iche maka ijikwa ihe na nkwakọba ihe.
Jiri ike batrị, enweghị eriri chọrọ. Manual scissor pallet truck, nke a bụ uwe ngwaahịa akụ na ụba maka ọrụ ụlọ nkwakọba ihe ọ bụla. Ngwaọrụ a na-eji ihe eji arụ ọrụ dị arọ, a na-ejikwa wiil ndị nwere okpokolo agba iji gbochie ịpịpịa ụkwụ. Ọ na-ejikwa atụmatụ mgbochi ntụtụ na ọrụ nchedo oke, nke a pụrụ ịdabere na ya ma dịkwa nchebe. Na-agbaso ụkpụrụ European EN 1757-2 na ụkpụrụ nchekwa ANSI/ASME nke America. Ka ọ dị ugbu a, anyị na-enye ọrụ omenala iji dochie ọrụ ntuziaka ka arụ ọrụ batrị eletriki.